January 14, 2020 - ThutaSone
ထီမတိုက်ပဲ မပေါက်ဘူးဆိုပြီး အမှိုက်တောင်းထဲ ထည့်လိုက်တာ ထီသည်မှ ပေါက်တယ်ပြောလို့ အမှိုက်တောင်းထဲကပြန်ရှာ
January 14, 2020 ThutaSone 0
အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျပ် သိန်းတစ်သောင်းဆုဆွတ်ခူး အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ( ၁)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လစ်ခဲ့သော( ၁၁)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ကျပ် ၁၀၀၀တန် မှ ဏ ၉၅၄၆၂၅ အက္ခရာဖြင့် ကျပ်သိန်းတစ်သာင်းဆု ဆွတ်ခူးရသွားသူကတော့ အုတ်တွင်းမြို့နယ် ခပေါင်းဈေးကုန်းမှ ကိုမြင့်သိန်း နှင့် မစန်းစန်းခိုင်တို့ဖြစ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ […]
သူမ သီချင်းကို ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ မသန်စွမ်းသူများကို ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ချယ်ရီသင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ အချစ်ဟာ လိုက်လို့ပြေးတာလား ပြေးလို့လိုက်တာလား ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေးနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင် ဆိုတဲ့ တေးသံရှင်ချယ်ရီသင်းရဲ့ သီချင်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပရိသတ်တွေအားပေးကြမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။ tik tok မှာလည်း ဒီသီချင်းလေးနဲ့ဆော့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများအပြားရှိခဲ့တဲ့အတွက် တော်တော်လေး ပေါက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးလို့ ဆိုရမှာပါ ။ […]
စိုးရိမ်လာရတဲ့ ဦးဗေလုဝရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
လူတွေကို ဟာသတွေနဲ့ ပျော်စရာတွေပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဗေလုဝဟာ ရုတ်တရက် စကားပြောတဲ့အာရုံကြောတစ်ခုကို သွေးပိတ်တဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ပင်လုံဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သတင်းကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါ….. ဒီဝေဒနာကြောင့် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဆေးရုံကို သတင်းလာမေးတဲ့အခါမှာ လူတွေကို မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်…. လက်ရှိဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဗေလုဝရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက […]
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း-တောင်ကြီးမြို့မှအေးသာယာလမ်းပိုင်းအထူးသတိထားရမည့်နေရာ ရပ်နီးရပ်ဝေး ခရီးသွားမိဘပြည်သူများသိစေရန် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း-တောင်ကြီးမြို့မှအေးသာယာလမ်းပိုင်း အဆင်းလမ်း စိုက်ပျိုးရေးတံတားကွေ့အလွန် မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၉မိုင်၇ဖာလုံ အဆင်းအကွေ့သည်မော်တော်ယာဉ်များ ဘရိတ်ပေါက်ခြင်း ဆိုင်ကယ်များအရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဝဲဘက်ကျောက်ဆောင်အား ဝင်တိုက်​ ပြီးသေဆုံးမူ့များမကြာခဏ ဖြစ်နေပါသောကြောင့် သံဃာတော်(၅)ပါး ပင့်ဆောင်၍ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ် တရားတော်များနှင့်ကမ္မဝါစာ များရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇယ် ခြင်း ပရိတ်ရေပက်ဖြန်းများကို ယနေ့ ၁၀.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် […]
ဘဝတပါးပြောင်းတော့မယ့်ညမှာ သူ့ဘာသာပဲသရဏဂုံတင် အပြုံးလေးနဲ့ဝိဉာဉ်ချုပ်သွားတဲ့ဆရာလေး …
ဘဝတပါးပြောင်းတော့မယ့်ညမှာ ဆရာလေး ဓမ္မဒိန္နာက သူ့ဖခင်ကို ခုလိုပဲမှာသွားသတဲ့…. ” ကိုယ့်မှာဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိရှိ ( ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့ )သူများကိုအပြစ်မပြောမိစေနဲ့။ သံသရာထိ၂- ခါနာလိမ့်မယ်။ မမှန်တဲ့စကားမို့ လူမုန်းများတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ ကိုယ့်အပြစ်ကို တွေ့အောင်ရှာ။ အကြောင်းကင်းတဲ့ အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူး။ ” လို့ နောက်ဆုံးပြောသွားပြီး သူ့ဘာသာပဲသရဏဂုံတင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့တရားမှတ်ရင်းဝိဉာဉ် ချုပ်သွားတယ်။ […]
ဂုဏ်ယူပါတယ် ဖိုက်တာကြီးရေခါဘီ၊မက်ဂရီဂေါတို့ ရဖူးတဲ့ဆုမျိုးကို အောင်လအန်ဆန်းလဲ ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပြီလေ…
ခါဘီ၊မက်ဂရီဂေါတို့ ရဖူးတဲ့ဆုမျိုးကိုအောင်လအန်ဆန်းလဲကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပြီလေ…ဂုဏ်ယူပါတယ်ဖိုက်တာကြီးရေ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့သောသူ၏ချစ်ပရိသတ်များအတွက်- ဒီနေ့မနက်@sanfordmmaမှာအသင်းဖော်တွေနဲ့လေ့ကျင့်မှုအပြီးမမျှော်လင့်ပဲနဲ့@worldmmaawards ဖြစ်တဲ့2019International Fighter Of the Year ဆု တံဆိပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကိုရရှိအောင်မဲပေးခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @fightersonlymagကိုလဲကျွန်တော့်ကိုစကာတင်စာရင်းမှာရွေးခြယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Great practice this morning with my teammates at @sanfordmma. Got […]
ဂျပန်သတင်းစာ မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းခံရတဲ့ ”လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူ ”…
ဂျပန်သတင်းစာ မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းခံရတဲ့ ”လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူ ”… ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင်စတင်ထုတ်ခဲ့သည့် ဂျပန်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့သည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူ နိုင်ငံကိုယ်စီရဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်မှာ ပြည်သူအများကမှတ်ကျောက်တင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ ကမ္ဘာကျော်ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံကြရတာပါဘဲ တန်ဘိုးမဲ့အာဏာရှင်လူတစ်စုလုပ်ရပ်ကြောင့် ကျုပ်တို့ဗိုလ်ချုပ် ခေတ္တငုပ်လျှိုးခဲ့ရပေမဲ့တန်ဘိုးရှိသူကို ဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံက သက်သေပြဂုဏ်ပြုထုတ်ဖေါ်လိုက်ပါပြီ” 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 […]
ကျော်လင်းမောင် ဆိုသောသူနှင့်ကျမ ၁၀.၇.၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ လူသိရှင်ကြားတရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ အခု နှင်းအိဇော် ဆိုသည်နှင့် သူနဲ့ ဖောက်ပြန်နေသည်မှာ ကျမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၅လလောက်ကစ၍ ဖောက်ပြန်နေသည်ကိုသိရှိ၍ ကျမ ကလေး အဖေမဲ့မည်ဆိုး၍ အကြိမ်ကြိမ်နားလည်ပေးခဲ့ပါသည် နားလည်ပေးသော်လည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တစ်ယောက်ကို အမြဲနှိပ်စက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတခါ သူနဲ့နှင်းအိဇော်ဆိုသည့်အမျိုးသမီး တူတူအိပ်နေသည်ကို […]
လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရ ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒရှိရင် ဘာမဆို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဘဝကို ရှင်သန်ရတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ လေယာဉ်မှူးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ ၂၄ နှစ် အကြာမှာ တကယ်ကို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Mohammed Abubakar […]